Xafladda Furitaanka Mashruuca Dib u dhiska Wadada isku xidha Lafaruur-Berbera-Sheekh
Xafladda Furitaanka Mashruuca Dib u dhiska Waddada isku xidha Lafaruug– Berbera – Sheekh
Dawladda Somaliland waxa ay maanta si rasmi ah u furtay mashruuc lagu dayac tirayo waddada isku xidha Lafaruug-Berbera-Sheikh, mashruucaasi oo laga maalgalinayo Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF). Waxa Mashruuca furitaankiisa si rasmi ah ugaga dhawaaqay tuulada Xamaas Madaxwaynaha Jamuuriyada Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud “Siilaanyo”.
Wadooyinka isku xidha Hargeysa Berbera iyo Sheekh waxa la sameeyay todobaatannadii intii u dhaxaysay February 1972 ilaa May 1975 waana waddooyin halbowle ah oo dekedda Berbera ku xidha Hargeysa illaa xuduudda Itoobiya. Isaga oo mar hore ka hadlayay muhiimadda waddadani u leedahay Somaliland ayuu wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Qaranka & Horumarintu Dr.Sacad Cali Shire yidhi:” Waddada Hargeysa illaa Berbera waa waddada ugu mashquulka badan ee dekedda ku xidha caasimadda iyo waliba Itoobiya. Xaalad aan wanaagsanayn ayay ku jirtaa waddadu. Somaliland waxay mahadnaq u diraysaa dadweynaha reer Denmark, Boqortooyada Ingiriiska iyo Norway oo mashruucan ku deeqay lagu hagaajinayo wadadda. Tanina waxay kor u qaadaysaa badbaadada iyo dhimista saxmadda isu socodka gaadiidka, sidoo kalena waxay wax ka geysan doontaa koboca dhaqaalaha dalka”
Mashruucan waxa fulinaysa Wakaalada Horumarinta Wadooyinka Somaliland ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yidhaahdo (RDA), waxaana ku baxaysa mashruucan lacag dhan Toddoba Milyan (7 Million USD) milyan oo laga bixinayo Sanduuqa Horumarinta Somaliland. Lacagtani waxay ku bixi doontaa dhismaha waddada iyo kor u qaadidda aqoonta iyo xirfada shaqaalaha ka shaqeeya Wakaalada Horumarinta Wadooyinka si ay awood ugu yeeshaan inay dayac tiraan wadooyinka Jira.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee la qabanayo waxa ka mid ah:
Dib u dhiska 35 Km oo ka mid ah waddada isku xidha Hargeysa ilaa Berbera, taasi oo ka bilaabmaysa Xamaas ilaa Berbera.
Dib u dhiska biriishka Hudiso ee u dhexeeya Sheekh iyo Berbera
Samaynta dhinacyada googo’ay iyo buuxinta gododka wadada isku xidha Berbera ilaa Sheikh.
Dhigidda laami 40mm ah dhumuc ahaan, dhererkiisuna yahay 20km inta u dhaxaysa Berbera iyo Sheekh.
Soo iibinta qalabka sahaminta iyo shaybaadh wadooyinka loogu talo galay
Soo iibinta qalabka lagu dayactiro wadooyinka oo ay ka mid tahay iska rogo.
Iyo Tababar la siinayo Shaqaalaha Wakaalada Wadooyinka Somaliland oo ku saabsan dayactirka wadooyinka.
Dhowaan ayaa Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) iyo Wakaalada Waddooyinka Somaliland qandaraas ku kacaya USD 5.8 Milyan ku siiyeen Shirkadda dhismaha waddooyinka ee Amal dayactirka waddada u dhaxaysa Xamaas, Berbera illaa Sheekh oo uu ku jiro biriishka Hudiso. Shaqada dayactirka wadaddu waxa ay bilaabmaysaa wax yar kadib marka lagu dhawaaqo mashruuca waxa aynna socon doontaa muddada 11ka bilood ee soo socda.
Waxa la filayaa marka uu mashruucu dhamaado inuu yaraado waqtiga loo kala soconayo goobaha wadooyinkani isku xidhayaan, lana yareeyo shilalka ka dhaca wadooyinkan iyada oo ugu danbayntiina mashruucu kor u qaadi doono dhaqaalaha dadka degan deegaanada wadaddu marto iyadoo la filayo inuu kordho dhaqdhaqaaqyada xagga ganacsigu.
Madaxa Hay’adda Horumarinta Caalamiga ah ee Boqortooyada Ingiriiska (DFID) Dr Phil Evans, ayaa sidoo kale yidhi sidatan: “ Waxannu ku faraxsannahay in mashruucii ugu horreeeyey ee laga maalgeliyo Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) uu midho dhalayo oo uu muujinayo faa’idadada laga helay hannaanka Hiigsiga Cusub (New Deal); iyada oo Komishanka Qorshaynta Qaranku uu dejinayo sida mashaariicdu u kala mudan yihiin, iyaga oo si wada jir ah ula shaqaynaya deeq bixiyayaasha. Waxannu ku rajo weynnahay inaanu aragno faa’idada dhaqaale ee mashruucani shaki la’aan keeni doono”
Hadallo kuwaas oo kale ahna waxa jeediyay danjiraha Denmark, Mr.Geert A. Anderson oo yidhi:”Waxan ku faraxsanahay inaan arko mid ka mid ah mashaariicda uu maalgeliyo Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SDF) oo la furayo kadib dedaal badan oo dawaladda Somaliland ku bixisay siiba Waakaladda Horumarinta Waddooyinka, Wasaaradda Qorshaynta Qaranka & Horumarinta iyo Wasaaradda Maaliyaddu. Mashruucani waxa uu la xidhiidhaa mashaariicda gaarka ah ee Somaliland loogu talo galay.” Safiirka waxa uu intaas ku sii daray “ Waxa la wada fahamsanyahay in maalgelinta kaabayaasha dhaqaalahu ay muhiimad gaar ah u leeyihiin shaqo abuurka iyo koboca dhaqaalaha iyo kor u qaadida xaaladda nololeed ee dadka reer Somaliland”.
Sanduuqa Horumarinta Somaliland waa deeq lacageed oo loogu talo galay in lagu caawiyo dawladda Somaliland kaas oo socon doona muddo afar sanno ah. Sanduuqa waxa loogu talo galay inuu qayb ka noqdo qorshaha shanta sanno ee dhinaca horumarinta Somaliland. Sanduuqa waxa maalgaliyay Hay’adda Horumarinta Caalamiga u qaabilsan dawlada Ingiriiksa (DFID), hay’adda Horumarinta Caalamiga u qaabilsan dalka Denmark (DANIDA) iyo Dawlada Norway kuwaas oo deeqda ay bixiyeen dhantahay USD 60 Milyan oo doolar. Waxa dheer mashruuca kor ku xusan in Sanduuqu u qoondeeyey lacag dhan USD 2.5 Milyan dayactir dhamaystiran oo lagu sameeyo waddada isku xidha Kalabaydh iyo Dila.
Mashruuca Awood dhisidda maamulka Wassaradda
Mashruuca dayactirka wadada Xamaas iyo Berbera